Muqdisho:-Guddiga maamulka Doorashada kuraasta Gobolada waqooyi Somaliland (SEIT) ayaa saaka ka bilaabay Xarunta Tababarka Booliska Jen. Kaahiye, Doorashada kursiga Gollaha Shacabka ee tirsigiisu yahay HOP#225 oo ay ku tartamayaan musharixiinta kala ah Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo Mudane Cabdiraxmaan Warsame Siciid.
Kursiga tirsigiisu yahay HOP#225 ayaa waxaa ku guulaystay Maxamed Cabdi Xayir Maareeyey waxaan uu helay 96 cod halka Cabdiraxmaan warsame Siciid uu helay 2 cod.
Dhinac kale Kursiga tirsigiisu yahay HOP#202 ayaa waxaa sidoo kale ku tartamay musharixiinta kala ah
1. Musharax xildhibaan Aamina Cumar Jaamac
2. Musharax xildhibaan Aamina Cismaan Diiriye
Musharax xildhibaan Aamina Cismaan Diiriye ayaa ka tanaasushay tartanka, waxana cod gacan taaga kalsoonida loogu qaaday musharax xildhibaan Aamina Cumar Jaamac oo dhamaan ergadii u codeeyeen. Sidaa daraadeed natiijada Hordhaca ah waxa kusoo baxday Xildhibaan Aamina Cumar Jaamac.
Guddiga maamulka Doorashada kuraasta Gobolada waqooyi Somaliland (SEIT) ayaa sheegay in lagu tartami doono ilaa 5 kursi waxaan doorashadu ka socotaa xarunta Tababarka Booliska Jen. Kaahiye ee magaalada Muqdisho.